Bhurawuza Hondo: Internet Explorer inoenderera ichirasikirwa neFirefox, Ndeipi Safari? | Martech Zone
Bhurawuza Hondo: Internet Explorer inoenderera ichirasikirwa neFirefox, Ndeipi Safari?
China, August 23, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Dzvanya chati kuti uone zvizere. Iwo mabhurawuza maviri ekuchengeta ziso ndeInternet Explorer neFirefox. Kupinda kweInternet Explorer kuri kudonha uye chikamu cheInternet Explorer 7 chinoita kunge chiri kudonha pasi Firefox!
Data inowanikwa: W3Schools
Safari haina kana kuita chero kukanganisa, kunyangwe nekuyedza kwayo kupinza mumusika weWindows. Zvichida chikamu chematambudziko eSafari ndiyo yekukurumidza uye inonyadzisa nyaya dzekuchengetedza idzo dzakafukurwa mukati maawa maviri kubva mukuburitswa kwadzo naLar Holm.
IMHO, iyo nyaya neInternet Explorer ingori nekuda kwezvikonzero zviviri:
The Internet Explorer Chikwata kuenderera nekusaziva kwe CSS zviyero. Kunyangwe zvinganzwika seichi chingave chidiki muzana chevagari, vanhu ndivo vangangonyanya kunetseka kuti vari kupatsanura - vanogadzira.
Ndingangonzwa kunge ndinovenga Internet Explorer, asi ini ndinonyatsoishandisa mazuva ese. Inotaridza kunge ichiita mushe uye, kana hacks mapeji akaitwa, kupihwa kwemapeji iwayo kwakanaka. Ini ndinoramba ndichirwisana nekushandiswa kwechishandiso, zvakadaro, nekukurumidza pandinoedza kushandisa menyu. Iko kusanzwisisika kwekumiswa kwemamenyu kurudyi chikanganiso chakakosha. Tarisa uone chero chishandiso uye ese mamenyu akaiswa kuruboshwe, kwete kurudyi.
Ini ndangobva kutakura Vista pa mwanakomana wangu, Bill, PC itsva yekupopota uye ndinofanira kukuudza kuti chimiro chinoshamisira, kunyanya ne Aero mhedzisiro inomhanya. Bill akakwanisa kuisa Office 2007 yechikoro uye ndinoda iyo ribhoni menyu system. Zvinogona kunditorera imwe nguva kuti ndizive kuti zvinhu zvese zviripi - asi kusvika parizvino, chimwe nechimwe chimiro chakamisikidzwa zvakanaka nezviratidzo zvinonakidza zvinomiririra chaizvo chiito.
Tichifunga izvi zveMushandisi Ruzivo uye Usability zvinowedzeredzwa mune yepakati zvigadzirwa zveMicrosoft, ndinoshamisika kuti Internet Explorer timu haina kuburitsa runhare rwekubatsirwa.
Usanditeerere, asi… ingo chengeta ziso rako pahuwandu.
Gadzira rako reCustom Startpage neGoogle Apps
GoDaddy inoti trademark kutyora kweGo-Daddy domain yakatengwa kubva kuGoDaddy
Aug 23, 2007 na11: 14 PM
Ndeapi matanho anomiririrwa mune yako graphic? Ndiyo webhusaiti yako here? Saiti stats?
Chii chinobva kune iyi data?
Ini ndanga ndichangobva kuverenga paLifehacker zvirevo zvekuti w3schools stats haina kunaka nekuti ivo vese vakatarisa kune vanhu vanoita webhu dhizaini - inova yakanyanya yakakwira mwero wekutorerwa firefox kupfuura mamwe manhamba.
Hausati wachera zvakakwana mairi zvakadaro.
Ini ndanzwa kutaura ikoko zvakare nezve webhu dhizaini. Ini pachangu ndinoshandisa Firefox kunyangwe dzimwe nguva IE isingadziviriki, kunyanya kana iwe uchitanga kushandisa zvimwe zveMicrosoft web based zvigadzirwa seSharePoint.
Ndatenda kune rako rakakura blog.
Ndinoda kuziva kuti zvivakwa izvi zvinobva kupi nekuti Mozilla Foundation yakangotaura mavhiki mashoma apfuura kuti vanovimba vanovavarira 30% muna 2008 (june).
Aya matanho anobva W3Schools. Ndine urombo ndakanga ndisina izvozvo pane zvakatumirwa! Ndakagadziridza posvo nayo mangwanani ano.
Kusvikira iwo matanho atanga kuenzanisa webhu seyakazara, iwo haareve zvakawanda. Iwe unogona zvakare kungoburitsa yako server stats.
Zvinokatyamadza kuona chati iyi paunofunga kuti nzvimbo zhinji hadzisi kuwirirana neFirefox. Semunhu wenguva refu mushandisi weFirefox, izvi zvinondipengesa.
Aug 24, 2007 na6: 50 PM
Yenguva refu IE6 kuvenga b / c yekusaita CSS kutevedzera, ndiri kushamisika kuona kusakwanisa kweIE7 kubata, kunyangwe hazvo Microsoft yakaita basa rakadzikama mukuona kuti madhiragi esita akagadziriswa. Izvo, zvakabatanidzwa nenyaya yekuti IE7 yaifanira kusundidzirwa kune vashandisi veWindows kuburikidza neKuvandudza, iwe waizofunga IE6 ingadai yakadzika (uye nekudaro, yakakwidza kupinda mukati IE7) parizvino.
Chris Schmitt akanyora rukuru-pfupi-runyorwa mameseji nezve misiyano mumabhurawuza maviri kubva pamaonero echimiro andakaongorora mubhurogu yangu pano.
Aug 27, 2007 na7: 31 PM
Kana iwe uchifarira, ini ndawedzera a tevera izvi nezvimwe zviwanikwa zvakakosha zvichibva pane mhinduro yemuverengi.
Sep 1, 2007 na1: 00 PM
Sezvineiwo kurasikirwa kweIE6 kuri kuturikira zvakananga kuIE7 share kukura .. tinofanira kuverenga izvi zvichireva kuti kukura kweFirefox kuri kuuya kubva kune vekare vashandisi veIE? Izvi zvingave zvakasikwa kuti Firefox inokwegura vashandisi veIE kuti vasvetuke ngarava, kupfuura vashandisi vakavimbika avo vaenda munzira yese yekusimudzira yeIE4-5-6-7…